Wajiga 2aad ee shirka midawga musharixiinta oo Muqdisho kabilawday - Tilmaan Media
Wajiga 2aad ee shirka midawga musharixiinta oo Muqdisho kabilawday
Waxaa magaalada Muqdisho markale shir oga bilawday midawga musharixiinta madaxtinimada Soomaaliya, shirkaan oo ah kii 2 aad ayaa waxaa kahoreeyay wajigii koobaad oo maalmo kahor laga soo saaray war murtiyeed ka kooban 18 qodob.
Shirkaan ayaa looga doodi doona waxyaabihii kasoo baxay kulamo ay musharixiintu layeesheen madaxda dowlad goboleedyada iyagoo kala hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda sida uu warbaahinta u sheegay Afhayeenka midawga musharixiinta Ridwaan Xirsi Maxamed.
Musharixiinta madaxwaynenimada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaan ku qanacsanayn habka dowladdu u maaraynayso doorashada gaar ahaan guddiyada ay dowladdu soo magacawday.
Shirkaan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dib u dhac ku yimid jadwalkii doorasho ee madaxda Dowladda Federaalka, kuwa Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir uu dib dhac ku jiro maadaama aysan maanta bilaaban doorashada xubnaha Aqalka Sare.
Doorashada xubnaha Aqalka Sare oo dib udhac ku yimid